ဗိုက်အ၀စား ၀က်သားကြက်ဥကြော်カツ丼 Katsudon ဟင်းပွဲကြီး !!!!!! - JAPO Japanese News
ဂါ 21 Jan 2020, 15:46 ညနေ
Hyogo ခရိုင်မှာ အရင်ကတည်းကရှိနေခဲ့တဲ့ ဘော့စ်ဘောကစားကွင်းရှိပါတယ်။ ကွင်းနာမည်ကတော့甲子園球場（こうしえんきゅうじょう）ပါ။ Professinal ဘေ့စ်ဘောအသင်း Hanshin Tigers ကလည်း အဲ့ဒီနေရာမှာ လေ့ကျင့်တဲ့အတွက် နာမည်ကြီးသလိုပဲ၊ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံး မသိသူမရှိတဲ့ ပွဲလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာ ကျင်းပလို့ပါ။
အဲ့ဒါကတော့ နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘေ့စ်ဘောပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါင်းစုံ ဘေ့စ်ဘောအားကစားသမားတွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲက ဒီ Koshien ကွင်းမှာ နွေရာသီရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ ပြိုင်ပွဲစတော့တာပါပဲ။
အကြီးတန်းကစားသမားတွေကတော့ တက္ကသိုလ် တတိယနှစ်ကျောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘေ့စ်ဘောကိုစိတ်၀င်စားကြတဲ့ မူလတန်းကျောင်းသားတွေကိုတော့ အရပ်ရှည်မယ်ဆို ၁၀ နှစ်အကြာ ဘေ့စ်ဘောကို တစိုက်မတ်မတ် သင်ပေး၊ လေ့ကျင့်ပေးပြီး ဒီ Koshien ဘေ့စ်ဘောကွင်းမှာ ၀င်ပြိုင်နိုင်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ကြပါတယ်။ ဘေ့စ်ဘောကို အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် အရေးအကြီးဆုံးကလည်း ဒီပြိုင်ပွဲပါပဲ။
အဲ့ဒါနဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေက ဘေ့စ်ဘောကစားတာကိုနားရပြီး၊ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲအတွက် စာကိုပြန်အာရုံစိုက်ဖို့ စည်းကမ်းချက်လည်း ထုတ်ထားပါတယ်။
တစ်နည်းပြောရရင်တော့ ဘေ့စ်ဘောကစားသမားတွေအတွက်ကတော့ ဘ၀တစ်၀က်ကို ရင်းထားရတဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့။
အဲ့ဒီလိုမျိုး သူတို့ကိုအားပေးကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးကလည်း ပြွတ်ခဲနေပါလေရော..
လက်ရွေးစင် ကစားသမားတစ်ယောက် မဖြစ်သေးတဲ့ ကလေးတွေ…
ကြိုးစားနေကြတဲ့ senior တွေကို ကြည့်ဖို့လာတဲ့ junior လေးတွေ…
နောက်ပြီး၊ မိမိရဲ့ ကျောင်းနာမည်ကိုဆောင်ပြီး ယှဥ်ပြိုင်နေကြတဲ့ အားကစားသမားတွေကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ လာရောက်အားပေးနေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေ….
သူတို့အားလုံးဟာ အဲ့ဒီကွင်းမှာလာပြီး ခွန်အားရှိသမျှနဲ့ ယှဥ်ပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မူးမေ့ပြီး လဲကျလုနီးပါး နေပူပူ နွေခေါင်ခေါင်ကြီးမှာ ပြိုင်ပွဲ၀င်ရတာပါ။
ရှုံးလို့ငိုနေတဲ့သူရော၊ နိုင်လို့၀မ်းသာပြီးမျက်ရည်ကျတဲ့ သူတွေရော အစုံပါပဲ။
တီဗွီဖန်သားပြင်ကနေပဲကြည့်ပြီး၊ ကိုယ်မသိတဲ့ကျောင်းဖြစ်တာတောင် သူတို့နဲ့ထပ်တူ ခံစားမိလာသလိုလို..
အားပေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးက ကျောင်းသားတွေပဲ လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့နော် …
အဲ့ကွင်းရဲ့ အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ ဆိုင်တွေကလည်း သူတို့ကိုအားရပါးရ အားပေးနေကြတာပါတဲ့..
大力食堂 Dairikishokidou ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးက ကွင်းရဲ့ဘေးနားလေးမှာပဲ ရှိနေပြီး..
အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ Special Menu ကတော့ カツ丼(大) Katsudon ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Katsudon ရဲ့ အရွယ်အစားကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါအုံး
ဆိုင်စဖွင့်တဲ့ ၁၉၆၆ ခုနစ်ကတည်းက ဆိုင်ရဲ့ Special Menu ဖြစ်ခဲ့တာပါတဲ့လေ
ပုံကိုကြည့်ပြီး သူ့အရွယ်အစားကို တိတိကျကျမြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထမင်းပန်းကန်လုံး ၇ လုံးစာရှိတာတဲ့… အမလေး စားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်က တန်လိုက်လေချင်းပါနော်.. ဟဟ
အပေါ်မှာနေရာယူထားတဲ့ ၀က်သားကြက်ဥကြော်၊ ကြက်သွန်နီတို့ကလည်း တော်ရုံတန်ရုံ ထည့်ထားတာမှမဟုတ်ဘဲ
ဒီလောက်အထိအများကြီးရတာတောင် ၇၀၀ ယန်းပဲတဲ့ ဗျို့
ပုံမှန်အရွယ်ဆိုရင် ထမင်းပန်းကန်လုံး ၁/၃ လုံးစာလောက်ပဲရှိပေမဲ့ ခရီသွားဧည့်သည်တွေလာကြတဲ့ နေရာမှာတော့ ၁၀၀၀ ယန်းလောက်တောင်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ယှဥ်ကြည့်လိုက်ရင် ၇၀၀ ယန်းတည်းနဲ့ ဗိုက်အ၀စားရတာ မယုံနိုင်စရာပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘေ့စ်ဘောဆော့ပြီး ဗိုက်ဆာဆာနဲ့လာကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို စားစေချင်လို့ပါတဲ့. ကြည့်စမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ဆိုင်ရှင်လေးက
“ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲလာပြီး ဗိုက်အပြည့်စားပြီး ဘေ့စ်ဘောကိုပဲ ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်” တဲ့။ အဲ့လောက်ထိ ဆိုင်ရှင်က ဘော့စ်ဘောကစားသမားတွေကို ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ
ဒီလိုတွေးပီး ဒီမီနူးကိုထုတ်ခဲ့လို့လည်း သူ့မှာအမြတ်တောင်မကျန်ဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဒီပို့စ်တာ ကြီးကိုကပ်လိုက်ပါတယ်။
“カツ丼 Katsudon ဟင်းပွဲကြီး မရောင်းတော့ပါဘူး”
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ မီနူးက instagram မှာပျံ့နှံ့ပြီး လူတွေကလည်း စိတ်၀င်တစားနဲ့ ဆိုင်ကိုလာကြတယ်။ တကယ်က ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပြီး တစ်၀က်ကျော်ကျော်လောက်အထိ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အကုန်မစားဘဲ ထွက်သွားကြသူတွေက မနည်းပါဘူးတဲ့ !!
အမြတ်ကိုတောင်မစဥ်းစားဘဲ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့လာတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် စေတနာအပြည့်နဲ့ ရောင်းချခဲ့တာပါတဲ့။ အခုလို အများကြီးပိုနေတော့ သွန်ပစ်ရုံကလွဲပြီးမရှိတော့လို့ လည်းပြောထားပါသေးတယ်
“ထမင်းရော ပိုက်ဆံရော မနှမြောဘူးလား?
အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်တော့ရဲ့ စေတနာတွေက အလကားဖြစ်ကုန်တယ်ဗျ”
Katsudon ပွဲကြီးတွေမရှိတော့တာ ဒါကြောင့်ပါပဲ။
ကျသင့်တဲ့ပိုက်ဆံကိုပေးတာပဲလေ၊ စားစား မစားစားပေါ့ . ဆိုတဲ့လူတွေကလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ရှင်အတွက်ကတော့ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ ဒီမီနူးကို ထုတ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာပဲလေနော်
စေတနာအပြည့်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ ဟင်းပွဲလေးကလည်း နောက်ဆုံးစေတနာကို နားမလည်ကြတဲ့လူတွေကြောင့် အဆုံးသတ်သွားပြီပေါ့…
ဒီနေ့ခေတ်လိုပဲပေါ့ ကိုယ့်ရဲ့ instagram မှာ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ Katsudon ကြီးကို ဂုဏ်ယူ၀ံ့ကြွားစွာနဲ့ ထုတ်ကြွားချင်တာကို နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း နည်းနည်းလောက်ပေါ့ အစားအစာအတွက် ကျေးဇူးတင်တာတို့ ၊ ဆိုင်ရှင်ရဲ့ စေတနာကိုနားလည်ပေးတာတို့ ဒါတွေမရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ လေ
ဒီလိုအခြေအနေထဲမှာမှ ၈လပိုင်း ၂၂ ရက်နေ့ ၁၄ နာရီမှာ ဘေ့စ်ဘောပြိုင်ပွဲပြန်ရောက်လာတော့မှာပါ
ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲအတွက်အပူ၊ ဒီအပူပြီးရင်တော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နွေရာသီကြီးလည်းပြီးပါပြီ
ဒါပေမဲ့ နောက်နှစ်ကျရင် ဒီလိုအချိန် ပြန်ရောက်လာအုံးမှာပါပဲ
ပြိုင်ပွဲရာသီပြန်ရောက်လာရင်တော့ လူထုတစ်ရပ်လုံးက ကစားသမားတွေကို အားပေးကြအုံးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို ထောက်ပံ့ပေးကြမလဲ? ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်မိတယ်……..
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရေသဘင်ပွဲ ?
HONDA က ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲနေလဲ ?